Fanazavana Perikopa Sept 2018. – FJKM
Vita soa aman-tsara iny ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny Jobily roa sosona, fa manohy ny fiatrehana ny fiainam-panompoany ny Fiangonana. Voatsiahy tamin’iny Jobily iny ny lalan-tsarotra nolalovan’ny Fiangonana hatrany am-pidirany; tany Antetezampasika ka hatreto Antanananarivo, eny hatrao amin’ny repoblika voalohany. Nandalo herisetra maro ny Fiangonana ka tsy maintsy nanohitra izany. Ny Mpanao herisetra matetika dia fantatra sy hita maso ka azo notoherina tsara, fa tsy mba toy izany ny ady amin’ny kolikoly izay azo heverina fa notoherin’ny Fiangonana ihany koa.
Amin’ity volana fahasivy, amin’ny taona 2018 ity, no ibanjinan’ny Fiangonana io ady amin’ny kolikoly io, ka nifidianan’ireo mpandrafitra perikopa ny lohahevitra hoe: “Sahia manohitra ny Kolikoly”
Amin’ity tari-dàlana ity no hiezahantsika hamaritra ny atao hoe: “Kolikoly” araka ny Perikopa voalahatra amin’ireo Alahady efatra, ka ny Testamenta taloha no horaisina.
Eksodosy 23, 1- 9: Ny toko faha 20 amin’ity boky ity no manambara ny nanomezan’Andriamanitra ny didy folo, satria olona manana an’Andriamaniny ho Andriamaniny ireo. Andriamanitra sady mitondra ny olony no manala azy ao anatin’ny fanandevozana. Io Andriamanitra mitondra sy manafaka io no manambara ny didiny mba ho porofom-pahariana vaovao ho an’ny Zanak’i Israely (Tsara ny manamarika fa mifanindran-dalana ireo fahariana ao amin’ny Genesisy toko voalohany sy ny didy folo). Mitohy io fanomezana lalana io hatrany amin’ny toko fahatelo amby roapolo. Ny andininy fahavalo no mandidy manokana ny Zanak’i Israely tsy hanao kolikoly. Azo zaraina ho roa ny Kolikoly araky ny fampiharan’izay manao izany dia ny kolikoly manome, ankilany ary ny Kolikoly mandray andaniny. Eto ny kolikoly dia fantatra amin’ny vokatra aterany. Ny Kolikoly no mitondra ny olona ao amin’ny aizina; toy ny olona jamba, tsy mahafantatra ny mazava. Mandrava sady manohatra ny faharian’Andriamanitra ny Mazava ny kolikoly. Ary raha manambara isika hoe: Aizina, moa tsy ny asan’ny Satana sy ilay ratsy va izany. Ankoatr’izany, ny kolikoly no mamadika ny marina izay endriky ny famadihana an’i Jesoa Kristy, Ilay “Fahamarinana”. Noho izany, ny Mpanao kolikoly dia efa mifidy sahady ny handa an’i Jesoa Kristy Fiainana ka manohitra ny antom-pahatongavan’Ilay Mpamonjy.
Salamo 15, 1- 5: I Davida dia isan’ireo Mpanompo nahafantatra tsara ny hatsaran’ny fiarahana amin’Andriamanitra, ka maminy indrindra izay nitondran’Andriamanitra azy, araka ireo hira nataony ao amin’ny Salamo. Koa na iza na iza te-hiara-miaina amin’Izy Andriamanitra dia anariny mba tsy handray Kolikoly satria tsy hoe: mamadika ny marina ihany, araka izay voalaza tetsy aloha ny kolikoly, fa mitondra ho amin’ny fanamelohana ny marina. Ny Kolikoly dia endriky ny fanomezana vahana indray ny ratsy fanahy ka anadinoana fa Andriamanitra irery no tokony homena voninahitra. Tsy afa-miara-mitoetra amin’Andriamanitra ny olona mamadika ny voninahitr’Andriamanitra ho amin’ny ratsy.
2 Tantara 19, 4- 11: Nozarain’ny mpandinika ho efatra ny bokin’ny Tantara (1 sy 2), ka ity perikopa ity dia ao anatin’ny fizarana fahaefatra farany, izay mitantara indrindra ny Fanjakana Atsimo. Nanomboka tamin’ny fisarahana ka hatramin’ny fahababoana tany Babylona (2 Tantara 10- 36). Eto amin’ity perikopa ity, Josafata mpanjaka no mamerina ny olona ho amin’Andriamanitra ka ny fametrahana rafitra mpitsara no anehoany izany. Napetraka isa-tanàna ny mpitsara. Ny Mpitsara dia hanatanteraka ny asany mitodika amin’Andriamanitra, fa tsy mitodika amin’ny olona tsaraina. Momba azy Andriamanitra Marina, ka marina amin’ny fitsarana ataony ny Mpitsara. Izany fahamarinam-pitsarana izany no ho fisehoan’Andriamanitra ao amin’izy Mpitsara. Noho izany, ny kolikoly dia endriky ny fanafoanana tanteraka an’Andriamanitra eo amin’izay manao izany sy eo amin’ny mpiara-belona.
Amosa 5, 10- 15: Araka ny voarakitra dia mpioty aviavy tany Tekoa (Jodia), teo atsimon’ny Betlehema i Amosa fa tsy mba mpaminany na zanaky ny Mpaminany (Amo.7, 14). Tao amin’ny tanàna nidiran’ny fandrosoana no nisy azy, ka mora nidiran’ny endrim-pandrosoana rehetra ihany koa ny olona. Fandrosoana nitondra ny Israely ho amin’ny fialana tamin’Andriamanitra ka nanaraka ny fanaon’ny fiarahamonina (and. 2). Voatanisa eto amin’ity perikopa ity ny sasantsasany tamin’ireo fanao ratsy nataon’ny Israely. Iray amin’ireny ny Kolikoly raisina mba hahazoana manavotra olona meloka. Amin’izany, ny kolikoly dia vidin-keloka, manafoana ny ran’i Jesoa Kristy hany mahavotra ny olona tamin’ny faharatsiany rehetra.
Koa ialao ny fanao ratsy dia ny kolikoly mandray na manome.